बाढी, पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा आश्वासन नबाँड | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
बाढी, पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा आश्वासन नबाँड
Published On : २८ असार २०७८, सोमबार १५:२८
‘……..लाई लान्छु नभन, गरिबलाई दिन्छु नभन’ भन्ने लोकोक्ति छ । अहिले गोरखाका प्राय सबै गाउँठाउँका बासिन्दा बाढी पहिरोको चपेटामा छन् ।
कसैको ज्यूधन गुमेको छ, कसैको बस्ने घर गएको छ । कसैका रोपेको खेत गुमेको छ, कसैको रोप्न तयार गरेर राखिएको खेत बगेको छ । सडक, गल्ली, गोरेटो, पुल बगेको छ, बारी बगेको छ, घर जोखिममा छ, मान्छे बिस्थापित छन् ।
खानेपानी धारा, विद्युतीकरण, सिँचाई कुलो सबका सब बगेका छन्, जोखिम भएका छन् ।
प्राकृतिक विपतमा आफ्ना प्रिय जनता भेट्न जानु स्वभाविक छ । दुखका बेला नभेटेर सुखका बेला मात्र जनता भेट्दा जनता टेढिन्छन्, टाढिन्छन् । त्यसैले यतिबेला नेताहरु गाउँगाउँमा जानु वाञ्छनीय छ ।
तर कतिपय नेताहरु दुख खेपिरहेको ठाउँमा पुगेर तस्वीर खिचाउने, सेलिब्रेटी बन्न जाने अभ्यास पनि देखिदै, भोगिदै आइएको छ । यो नमकहराम नेताको प्रवृत्ति हो । लोकतन्त्रमा नागरिकसँग चित्त नबुझेको कुरा अभिव्यक्त गर्ने अधिकार छ । अभिव्यक्त गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल पनि छ । उसले नेताको अपच हुने व्यवहार देख्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरेर असन्तुष्टि पोखिहाल्छ ।
कतिपय नेताहरु विपतले हायलकायल भएका जनतासामु गएर हुने, नहुने आश्वासन बाँढेर ‘मुतको न्यानो’ दिने काम गर्छन्, जुन पूरा गर्न उनीहरुको बरकतले थाम्दैन । अनि जनता निराश हुन्छन् । यसले नेता, नेतृत्व र सिँगो राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । यसले राजनीतिमा दुरगामी असर पु¥याउँछ ।
तसर्थ विपतका बेला जनताको सामु पुग, तर आश्वासन दिन नहतारिऊ । बरु आफ्नै आँखाले देखेको सजीव समस्या निदानका लागि थाहै नदिई लागि पर ।
छोरा र छोरी समान भन्ने आस्था जगाऔ
भनिन्छ, अल्प विद्या भयंकरी । वेदमा विश्व छ, वेदमा ज्ञान र विज्ञान सबै छ, परन्तु
जोखिम नभएको ठाँउमा विद्यालय खोल्नुपर्छ
गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाले साउन १७ गतेबाट विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । सबै विद्यालयलाई पत्राचार
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिइएको १२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पूर्व योजना अनुसार निर्माण
गाउँका काङ्ग्रेसको सुझावको गाम्भीर्यता
नेपाली काङ्ग्रेस गोरखाले आसन्न अधिवेशनको तयारीस्वरुप विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न सुरु गरेको छ । क्षेत्र